BBC Somali - Cayaaraha - Sida Cayaaruhu u dhaceen
Sida Cayaaruhu u dhaceen
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 13 Mey, 2012, 16:55 GMT 19:55 SGA
17:35 Dabaaldeg xoog leh ayaa ka bilowday garoonka, iyadoo Man City garoonkeeda Itihad loogu caleemo saaray horyaalka England Premiership.
17:30 Manchester City Sanadkan iyadaa koobka qaaday markii cayaarteedu ugu dambaysay ay 3-2 uga adkaaday kooxda QPR.
17:28 Manchester City waa horyaalka koobka England Premiership.
17:27 Maalin taariikhi ah ayay u tahay Manchester City, waxaa laga joogaa muddo 44 sano ah markii ugu dambaysay ee koobka horyaalka England ay Manchester City qaaddo.
17:26 Kabtanka Kampeny ayaa koobkta loo dhiibay. Man City ayaa dabaaldeg bilwoday oo cayaartoyda ayaa koobka isku dhiidhiibaysa midba mar.
17:25 Cayaartoyda Manchester City waxay soo xirteen funaanado ay ugu qoran yihiin CHAMPIONS.
17:25 Kabtanka kooxda ayaa goor dhow koobka loo dhiibi doonaa.
17:23 Manchester City ayaa hadda biladihii la siinayaa cayaartoyda, iyadoo tababare Mancini uu ugu horeeyay biladaha cidda la guddoonsiiyay.
17:00 Tartanka England Premiership ee sanadka 2011/2012 waxaa ku guulaysatay kooxda Manchester City.
16:58 Horay ayaa loo saadaalinayay in Manchester City ay koobka qaadi doonto, balse ilaa daqiiqadihii ugu dambeeyay ayay ku qaadatay Manchester City in ay laba gool dhaliso iyadoo muddo dheer gool laga horeeyay.
16:57 Laba Manchester waa isku dhibco min 89 dhibcood balse Manchester City ayaa todoba gool ka horaysa koonxda Manchester United.
16:56 Manchester City, ayaa markii ugu horaysay sanadkii 1968-dii ku guulaysatay koobka England Premiership.
16:55 Sidan Manchester City ayaa koobka ku qaadaysa.
16:54 Manchester City waxaa goolka u dhaliyay cayaaryahanka Eguero.
16:54 Manchester City 3-2 QPR.
16:53 Gool sadexaad ayay dhalisay Manchester City.
16:52 Cayaartu waa Manchester City 2-2 QPR.
16:51 Mahcester City ayaa gool heshay, waxaana madaxa ku dhaliyay Dzeko.
16:50 Manchester City oo filaysay in ay markii ugu horaysay ilaa sanadkii 1968-dii koobka qaaddo ayaa hadda si dirqi ah uu farahooda uga baxay.
16:50 Koonihii afaraad ayay soo laadaysa Man City oo xiriir ah.
16:49 Koone kale ayay heshay kooxda Manchester City.
16:47 QPR oo weerar ku qaaday Man City ayaa laga soo celiyay bannaanka sideed iyo tobanka.
16:46 Koone ayay heshay Man City, balse dhinaca kale ayay ka baxday.
16:45 Dahmaadka cayaarta wax badan kama dhimana waxayna marayaa Manchester City 1-2 QPR.
16:44 Xaaladdu sida ay tahay Manchester United ayaa bannaanka ka qaadan doonta koobka.
16:43 Laad toos ayay Manchester City ay ka laadanaysaa banaanka sideed iyo tobanka.
16:42 Koone ayay soo laadanaysaa Manchester City.
16:41 Dzeko ayaa kubad uu soo xarageeyay dibedda isaga saaray.
16:41 Kooxda Manchester United waxay 1-0 ku hogaaminaysaa kooxda Sunderland oo ay gurigeeda ugu tagtay.
16:40 Man city 1-2 QPR.
16:40 Toban ayay ku cayaaraysaa QPR.
16:39 Difaac adag ayay ku jirtaa kooxda QPR.
16:38 DZeko ayaa birta geeskeeda kubadda dhigay oo bannaanka ayay uga baxday.
16:37 Wareegga rigooraha afkiisa ayaa loo dhigay kubadda oo ay ka laadeen.
16:36 Man City bannaanka sideed iyo tobanka ayay ku xariiftamaysaa.
16:35 Balotteli ayaa soo galay oo waxaa Manchester City ka baxay Carlos Tevez.
16:35 Samir Nasri ayaa bannaanka u saaray kubadda oo ku laaday goolka.
16:34 Manchester City goolka afkiisa ayay kubadda ku haysaa, iyadoo QPR ay kulli difaac ku jiraan.
16:32 Carlos Tevez oo soo xarageeyay kubadda ayaa dibadda u saaray isagoo is leh goolka ku abaar.
16:31 Koone afaraad oo xirir ah ayay heshay Man City, walise way ku sari la'yihiin.
16:27 Koone ayay soo tuuratay Manchester City, balse wali goolka afkiisa ayay kula wareegaysaa Manchester City.
16:26 Gool labaad ayaa laga dhaliyay Manchester City, cayaartu waxay maraysaa Man City 1-2 QPR.
16:24 Kalinta sadexaad ayaa iyada lafteedu ay ku tartamayaan Arsenal iyo Tottenham oo min 25 dhibcood yeelanay hadii sida hadda xaaladdu tahay.
16:23 Manchester City 73 boqolkiiba ayay kubadda haysataa balse cayaatu waa 1-1, oo aanay dan ugu jirin kooxda Manchester City, hadii Manchester United ay badiso.
16:22 QPR ayaa Toban cayaartoy ku cayaarasa oo Joe Burton laga saaray cayaarta.
16:21 Sida xaaladdu hadda tahay kooxda Manchester United ayaa koobka qaadi karta.
16:20 Tottenham ayaa gool kale dhalisay oo Fulham ku leh laba gool.
16:19 Koone sadexaad aya Man City laadatay balse goolhaye Kenny iyo difaaca QPR ayaa diiday in ay marnaba dhaafto kubaddu.
16:18 Koone ayaa Silva uu soo laaday balse dhinaca kale ayay hadana koone ka noqotay.
16:17 wuu laaday balse darbiga ma dhaafin walina kubadda waxay ku wareegaysaa goolka QPR, ugu dambayntiina waxaa dibedda u saaray Zabaleta.
16:17 Tevez ayaa u taagan.
16:15 Sideed iyo tobanka afkeeda ayaa kubadda ay ka laadanaysaa kooxda Manchester City.
16:14 Joe Burton, ayaa calaamadda guduudan la siiyay oo garoonka laga saaray.
16:13 Tevez ayaa dhulka la dhigay kadib markii uu riday Joe Barton, waxay u eg tahay in uu suxul u qariyay, garsooraha ayaa hadda go'aan gaaraya.
16:12 Arsenal ayaa gool kale ka dhalisay kooxda West Brom oo iyaduna leh 2 gool. Booska sadexaad ayay Arsenal soo galaysaa.
16:10 Koone ayay heshay Manchester City kadib markii Hill oo difaaca QPR ah uu bannaanka u saaray kubad uu geeska kala soo galay Nasri.
16:09 Hadii ay sidan ku dhamaato waxaa goobka qaadi doonta kooxda Manchester United.
16:09 Manchester City 1-1 QPR.
16:07 Cayaarta oo dib u bilaabay ayaa Jibril Cise uu gool barbardhac ah u dhaliyay kooxda QPR.
15:56 Swansea 0-0 Liverpool ayaa qaybtii hore ku dhamaatay.
15:55 Sunderland 0-1 Manchester ayay qaybtii hore ku kala baxeen.
15:54 Stoke 1-2 Bolton ayay nasashada ku galeen.
15:54 Norwich 2-0 Aston Villa ayaa barbardhac noqday.
15:53 Everton 2-0 Newcastle.
15:52 Chelsea 2-0 Blackburn ayay isla marayaan.
15:51 West Brom 2-2 Arsenal, iyagoo kala leh ayay ku soo noqon doonaan qaybta labaad.
15:50 Tottenham 1-0 Fulham, ayay ku dhamaatay qaybtii hore.
15:49 Norwich 2-0 Aston Villa ayay ku kala nasteen.
15:48 Manchester City 1-0 QPR ayay ku kala nasteen.
15:46 Waxaa moodaa in Manchester City ay cayaarta xawaare sare ku waddo.
15:46 Qaybtii hore gabagabo ayay maraysaa, Man City ayaana weerar ah.
15:45 Yaya Toure ayaa ugu dambayntii la badalay, waxaana u soo galay De Jong.
15:44 Laba Manchester, City iyo United ayaa dhibco ahaan siman oo mid walba ay leedahay 89 dhibcood, balse waxaa u dhaxeeya sideed gool oo farqi ah
15:43 Manchester City ayaa kubadda isku dhiidhiibanaysa oo wali cayaarta ku gacan saraysay.
15:41 Yaya Toure ayaa bannaanka u baxay dhaawac awgii balse markiiba ku soo laabtay maadaama daqiiqado yar ay ka harsan yihiin dhamaadka qaybta hore.
15:39 Nasri ayaa kubadda u soo dhiibay Yaya Toure oo isna u sii gudbiyay Zabaleta.
15:39 Zabaleti ayaa gool u dhaliyay kooxda Manchester City.
15:38 Manchester City weerarka ay ku hayso goolka kooxda QPR.
15:37 Manchester City waxaa ka dhaawacan oo ay dhici kartaa in uu garoonka ka baxo Yaya Toure oo dhutinaya.
15:37 Chelsea 2-0 Blackburn
15:36 West Brom 2-2 Arsenal.
15:27 West Brom 2-1 Arsenal, waxaa ka kala dhaliyay Long daqiiqadii 11-aad iyo Dorrans daqiiqadii 15-aad ayay kala dhaliyeen.
15:27 Wigan 2-1 Wolves.
15:27 QPR way iska saartay kubadaas.
15:26 Kooxda Manchester City ayaa sideed iyo tobanka afkeeda loo dhigay laad toos ah.
15:24 Manchester United gool ayay ka dhalisay Sunderland oo gurigeeda ay ugu tagtay.
15:24 Laad toos ayaa QPR loo dhigay oo ka laadanaysa bannaanka sideed iyo tobanka.
15:23 Natiijadaas waxay dan u tahay kooxda QPR oo xitaa hadii cayaartan looga adkaado aan hari doonin.
15:22 Kooxda Stoke ayaa gool ku leh Bolton.
15:21 Manchester City marna kama fogaanayaa goolka QPR, Markanna Zabaleti
15:20 Everton waxay gool ka dhalisay Newcastle. Everton 1-0 Newcastle.
15:19 Cayaarta inta badan waxaa ku gacansaraysa kooxda Man City, balse ilaa hadda waxba way ka dhalin la'dahay kooxda QPR.
15:17 Wigan gool ayay ka dhalisay Wolves, oo cayartoodu waa 1-1 barbarro.
15:15 Goolhayaha QPR Kenny ayaa dhexda ka helay kubadda uu Silva goolka afkiisa soo dhigay oo loo waday Nasri.
15:14 Manchester City 0-0 QPR.
15:13 Wigan 0-1 Wolves ayay maraysaa, Norwich 1-0 Aston Villa.
15:11 West Brom 0-1 Arsenal. Waxaa Arsenal golka u dhaliyay Benayoun daqiiqadii 4-aad.
15:10 Tottenham 1-0 Fulham.
15:10 Adebayor ayaa goolka u dhaliyay Tottenham daqiiqadii 7-aad.
15:09 Arsenal waxay gool ku leedahay kooxda West Brom.
15:07 QPR oo kubadda iska difaacday ayaa hadda Man City ay goone heshay balse markiiba QPR dibedda ayay isaga saartay.
15:06 Yaya Toure ayaa bannaanka u saaray kubad ay Man City ku weerar gashay oo Eguero uu kubad bixi lahayd dib garoonka ugu soo celiyay.
15:05 Cayaaraha kale kooxda Tottenham gool ayay ka dhalisay kooxda Fulham.
15:04 Silva ayaa soo laaday balse QPR way iska saartay.
15:03 Koone ayaa lagu ganayaa QPR.
15:02 Manchester City markiiba weerar ayay ku bilowday QPR.
14:59 Way bilaabatay cayaartu.
14:58 Cayaartu waxay bilaabanaysaa goor dhow.
14:56 Hadd ayay garoonka soo galeen kooxaha Manchester City iyo QPR.
Halkan goordhow kala soco cayaaraha ugu dambeeya ee tartanka Horyaalka England. Qoraal toos ah ee cayaarta u dhaxaysa Manchester City iyo QPR iyo natiijada dhamaan cayaaraha: